Isiqhamo esinqwenelekayo nguDrake - Izinto Zobugcisa
Ngaphezulu kokubethwa kwendlu ethambileyo kunye ne-vibes eguqukayo, iinkcukacha zikaDrake ngomzabalazo wakhe wokugcina ubudlelwane obukude.
Kunzima kwi-buildin 'trust kude
Ndicinga ukuba kufuneka sikhuphe ukuzibophelela okwangoku
Isizathu sokuba siwele ecaleni
UDrake uyayamkela le ntokazi ukuba kunzima ukugcina ukuthembeka kunye nokuthembeka xa behlala kude kakhulu. Ngenxa yeso sizathu ucinga ukuba kungcono ukuba babubeke ubudlelwane.
I-passionfruit yintlobo yomdiliya yentyatyambo enomdla ezelwe eMzantsi Melika. Yabizwa njalo ngabavangeli baseSpain kuba babecinga ukuba ifuzisela iinzipho nameva okubethelelwa (okanye inkanuko).
Nangona isihloko sengoma singabonakali kumagama adibanisa nomculo osetyenziswa nguDrake kwi-chorus.
Ukuthanda iimayile kude
Phambuka ngezinto ozithethayo
Dlula kwiindlela zam zakudala
Umvelisi waseLondon uNana Rogues ubonelele ngesixhobo soku kunye nokunye Ngakumbi uBomi umkhondo 'Skepta's Interlude.' Ngaphambi kokusebenza noDrake, uNana Rogues wayesaziwa kakhulu ngokubeka phantsi isingqi sikaTinie Tempah angatshatanga 'Amantombazana Anje.' Uye wasebenzela izinto ezahlukeneyo zase-UK kunye nezenzo zomgibe kubandakanya neCandelo Boyz, iWiley kunye neSkepta.
Ingoma ivula ngelizwi likaDetroit u-DJ Moodyman othathwe kwiseti ka-2010 awayenzayo eManchester, eNgilane.
Umlingisi waseMelika, imvumi kunye nemodeli uZoe Kravitz ubonelela ngezandi zangasemva. Uyintombi yemvumi uLenny Kravitz kunye nomlingisi uLisa Bonet.
Ukuthetha no Ubuchule malunga nenkuthazo yezixhobo zakhe, uNana Rogues uthe: 'I-vibe iyothusa. Qho xa ndicacisa ebantwini, abantu bajonge kum abahlekisayo. Ke ngokusisiseko, xa ndenza ukubetha bendicinga ngamafu. Njengamafu ehlathini azaliswe luthando. Kodwa hayi uthando oluvela kwintombazana. Uthando olusuka ebomini, kunye nokuxabisa nje okuhle, oku-bouncy.
URogues uvumile ukuba wayecinga ngoDrake xa wayesenza izixhobo, kodwa engafuni ukuya ngaphambili. 'Ndenza ukubetha, bendicinga ngoDrake kodwa ibingomnye wabo xa ungumvelisi, uyabetha, ucinga,' Ngubani endiza kungena kuyo? ' Wayengomnye wabafana kodwa andenzelanga yena, 'ucacisile. Emva komboniso weeMbasa ze-BRIT kunyaka ophelileyo, uDrake weza kumdlalo weCandelo le-Boyz eShoreditch. Kwaye yaqala apho. Ke ndiye ndaziswa kuDrake. Ndithumele umculo kuDrake, kodwa bendingazi ukuba yiPassionfruit kude kube ngumhla wokukhutshwa. Kuyaphambana, kuba bendingenalo nofifi. Kwaye ke bam, kuyeza nje. '
Iingoma zeNkosana eNtsha yeBel-Air Umxholo weNgoma ngu-DJ Jazzy Jeff kunye neNkosana eNtsha
Ukuqengqeleka nzulu nguAdele
Iingoma zeWhisky In the Jar ngu-Thin Lizzy
Lyrics for Ndihamba Nawe by Avril Lavigne
Iingoma zabangakhathaliyo ngathi nguMichael Jackson
Iingoma zoku Apha Kuza Ilanga nguBeatles
Lyrics for Igama Lothando by Martin Garrix
Xhuma ujikeleze iNdlu yeNtlungu
Iingoma zoSuku oluLuweyo yiNkqubo yeA Down
Iingoma zokuvumela Uthando lwakho lugeleze ngabazalwana bakaBellamy
Lyrics for Utshintsho Luya Kuza by Sam Cooke
Indlu yelanga eliphuma lyrics lyrics
sunny and cher ndikufumene babe lyrics
Abalwi be-foo baya kwiqhawe lam
kwakudala bendi thandana ngoku ndiyahlukana ne lyrics
UJustin timberlake-yintoni ejikelezayo ... iza ngeenxa zonke
U-bj thomas uxakeke kwizandi zokuva